→ Wararka laga helayo Gobalka Bay ayaa ku waramaya in maanta Boqolaal in ciidamada xabashido ka ka baxayaan Baydhabo kuwaasi oo wararku ay sheegayaan inay ku wajahanyihiin dalkooda halka warar kale ay ku waramayaan inay duulaan ku yihiin deegaanada Shabaabku ka joogaan Bay iyo Bakool. Ciidanka Itoobiya waxay ka baxeen garoonka diyuuradaha Baydhabo iyo xerada 60-aad ee dhacda hareeraha Baydhabo sida ay ku waramayaan dadka Baydhabo,waxayna qaarkood gaareen Owdiinle ee Gobalka Bay. Ciidamada Itoobiya ayaa horay kaga baxay Degmada Xudur iyadoo haatan la soo warinayo dhaqdhaqaaq bixitaan ah inay ka wadaan Qansax dheere iyo deegaano kale oo dhaca gobalka Bay. “Bayadhabo baabuur”Uural” lama saaran karo” Hooyo Somaliyeed oo qax ku maqan mudo dheer. Voice Of Somalia-Banaadir Post.
← Qaramada Midoobe oo markii uguhoreysay ka hadashay arinta SheekhXasan Daahir AweysXilli muddo toddobaad ah uu Sheekh XasanDaahir Aweys uu ku jiro gacanta DowladdaFederalka ee Somaliya, ayaa waxay QaramadaMidoobe ka hadashay, isa soo dhiibida SheekhXasan Daahir Aweys.Amb. Nicholas Kay Ergayga Gaarka ah eeQaramada Midoobe u Qaabilsan ArrimahaSomaliya, ayaa wuxuu marka hore uu qiray inSheekh Xasan Daahir Aweys uu ku jiro gacantaDowladda, ayna soconayaan su’aalo laweydiinaayo.Ergayga ayaa wuxuu sheegay in Sheekh XasanDaahir Aweys looga baahan yahay inuucadeeyo, go’aankiisa ku aadan inuu si sax ah uuuga tanaasulay xagjirnimada iyo in kale.Nicholas Kay ayaan wax walaac ah ka muujinxaalada caafimaadeed ee Sheekh Xasan DaahirAweys, oo maalmihii la soo dhaafay ka soorayneysay, markii ay jirdil kula dhaqaaqeenCiidamada Dowladda.Mareykanka ayaa horey Xasan Daahir Aweysuga mamnuucay safarada dalalka dibadda, kadibmarkii uu si adag uu ula dagaalamay Dowladdiiuu Madaxweynaha ka ahaa Shariif SheekhAxmed.Laakiin Mareykanka ayaan wax dhaqaalo ah duldhigin madaxa Sheekh Xasan Daahir Aweys, cidiinolol iyo geeriba ku keenta, iyadoo loo arkaayaymid ka yara dhow Saraakiisha sar sare eeIslaamiyiinta Somaliya ku sugan.Dowladaha Qatar iyo Turkey ayaa waxaa larumeysan yahay inay kaalin ku lee yihiin, arintaSheekh Xasan Daahir Aweys, ee ku aadan inuuisaga soo goysto Ururka Al Shabaab.